Qalabka korantada marawaxadaha dabaysha wata & kuwa soosaara qiimaha
Soo-saareyaasha sanduuqa marawaxadaha dabaysha
Dabayl Wejiga Dabaysha Awooda Sare ee Dabaysha Gearbox
Boorsada qalabka ayaa sida caadiga ah loo adeegsadaa marawaxadaha dabaysha si ay ugu kordhiso xawaaraha wareejinta min-xawaare hooseeya oo leh koronto-dhaliye xawaare sare.The gearbox-ka ugu fiican qiimaha ugu fiican.
Tobannaan sano, waxaan soo saarnay sanduuq marawaxadaha marawaxadaha dabaysha iyo waxyaabaha ka kooban, waxaan u baahanahay inaan ku badino xawaaraha marawaxadaha dabaysha iyadoo daraasiin loo gudbiyo koronto-dhaliyaha.
Maaddaama aan nahay alaab-qeybiye buuxa oo loogu talagalay codsiyada tamarta dabaysha, waxaan u leenahay waayo-aragnimo badan oo megawatt ah Teknolojiyada & Hal-abuurka Gearboolka Dabaysha Dabaysha, iyada oo qalabka wax lagu gooyo ay ka sarreeyaan naqshadaha gearboxka, si loo wanaajiyo kalsoonida sanduuqyada marawaxadaha dabaysha.
Iyada oo sannado ah waayo-aragnimo wax soo saar, waxaan horumarin karnaa sanduuqyada qalabka sida waafaqsan baahiyaha iibsadeyaasha.Waxaan nahay mid ka mid ah shirkadaha tirada yar ee leh cilmi baaris iyo karti horumarineed. Jawaabaha firfircoon ee qalabka kaabayaasha dabaysha ayaa lagu baaraa iyadoo la adeegsanayo tiro ahaan.
Waxaan haynaa sannado badan oo waayo-aragnimo soo-saaris ah, kooxda R&D oo heer sare ah, iyo adeeggayaga iibka ka dib ayaa sidoo kale meesha yaal. Inta badan sanduuqyada gear-ka ee 1.5 MW lagu qiimeeyo awoodda kala duwan ee marawaxadaha dabaysha waxay adeegsadaan nidaam hal-ama laba marxaladood oo diyaarinta meeraha ah.
Gearbox kor u qaadis ah
Tilmaamaha cusub ayaa ballan qaadaya sanduuqyada marawaxadaha dabaysha ee la isku halleyn karo, Sogears xalalka tikniyoolajiyadda horumarsan waxay gacan ka geystaan ​​isbeddelka nidaamka tamarta adduunka, Naqshadeynta sanduuqyada marawaxadaha dabaysha iyadoo la tixgelinayo sawaxanka, oo leh kartoonno la isku halleyn karo, adag oo hufan oo loogu talagalay marawaxadaha dabaysha. hal / dhaqameed, meeraha, heical, xawaaraha kordhinta gearbox. Kordhinta wax soo saarka tamarta dabaysha iyo isku halaynta qiimaha ugu wanaagsan ee suurogalka ah. Waxaan soo saareynaa makiinadaha marawaxadaha marawaxadaha dabaysha ee awoodaha 55 kW, 250 kW iyo 500 kW iskaashiga farsamada.
Annaga oo ah soo saareyaasha hogaaminta xalka tikniyoolajiyada iyo adeegga wershadeynta Wind Turbine Gearbox, waxaan siineynaa adduunka oo dhan, oo ay ku jiraan Shiinaha, Hindiya, Mareykanka, Yurub, oo ay la jirto OUR Wind Mill Gearboxes, Awooda Sare ee Dabaysha Dabeyl Weel Karinta.
Qalabka Qeybaha loo Isticmaalo Nidaamka Quwadda Dabaysha
Waxaan bixinaa alaab tayo sare leh, oo qiime jaban leh. Marawaxadaha dabaysha yaryar ee heer-kW ee awoodda lagu qiimeeyay uma baahna adeegsiga bokisyo. Qalabka dabaysha dabayl-wadata ayaa kaalin ka qaadata ku dhufashada xawaaraha marawaxadaha dabaysha iyadoo daraasiin loo kala qaado loona gudbiyo matoorka korantada.
Boorsooyin badan oo jecel
Muhiimad gaar ah uma laha dayactirka saxda ah in si fiican looga ogaado waxyaabaha maraakiibta marawaxadaha dabaysha iyo dhismahooda Awoodda ka timaadda wareegga rotor-ka marawaxadaha dabaysha ayaa loo wareejiyaa koronto-dhaliye iyada oo loo marayo tareenka korontada. Qalabka loo yaqaan 'wind-turbine gearbox' ayaa door ka ciyaara isku dhufashada xawaaraha marawaxadaha dabaysha oo daraasiin ah una gudbiya koronto dhaliyaha.
Haddii aad haysatid alaabada aad ugu jeceshahay, kaalay oo nala soo xiriir! Waxaan diyaar u nahay isla markaana sugeynaa iskaashigeenna. Waxaan u qaadanaa tayo ahaan sida faa iidadeena oo qiimaha ugu hooseeya uu yahay daacadnimo.
Xaddid Miisaankayga Jeegaanta Hadda
Waxaan qiimeyneynaa midkastoo su'aalahaaga ah